कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको ताला चाबी बुझाउन राजी हुँदै शाक्यले राखे यस्तो शर्त - Nepal Tale | - Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, English news, Blogs and more.
कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको ताला चाबी बुझाउन राजी हुँदै शाक्यले राखे यस्तो शर्त
Published Date : २०७८ श्रावण २१, बिहीबार
काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पदबाट राजीनामा गर्न तयार रहे पनि अरु ठाउँमा विकल्प दिनुपर्ने बताएका छन् । उनले आरोप मात्रै लगाएर पदबाट हटाइए कानुनी प्रक्रियामा जाने पनि बताए ।
प्राधिकरणमा आफू आएपछि धेरै काम गरेको भए पनि नभनेकाले काम नगरेको जस्तो देखिएको उनको भनाइ थियो । उनले सरकारबाट राजीनामाका लागि कुनै निर्देशन वा अनुरोध नआएको दाबी पनि गरे ।
“राजीनामा गर्न निर्देशन वा अनुरोध आएको छैन । तर, सरकारले जे जिम्मेवारी दिन्छ, त्यो जिम्मेवारी लिन तयार छु । सरकारले दोष देखाएर होइन, अर्को ठाउँमा तपाईंको आवश्यकता छ भनेर लैजान्छ भने त्यहाँ जान तयार छु” बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
सरकारले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी गरेको छ ।
२४ घण्टामा ४६९ जना कोरोना संक्रमित थपिए, ११ को मृत्यु
लाइसेन्स छाप्ने कार्ड अब केहि दिनमै आउने, ट्रायल पास भएकाले कहिले पाउछन् लाइसेन्स ?
मंगलबार कुन-कुन स्थानमा वर्षा हुदैछ ?